Kaaribiyaan - Wikipedia
(Waxaa laga soo toosiyay Karabiya)
Kani waa maqaal ku saabsan wadanada la isku yidhaahdo Kaariibiyaanka. Qoraal ku saabsan dadkii asal ahaan loogu tegay Kaaribiyaanka fiiri Dadka Kaaribiyaanka. Maqaal ku saabsan biyaha badaha ku hareersan fiiri Bada Kaaribiyaanka.
Kaaribiyaan (ingiriis: Caribbean, /ɨˈbiːən/ ama /rɪbiən/; Isbaanish: Karibe; Dhatj: Caraïben ama Caraïben; af Hindi: कैरिबियन "Kairibiyana"; ; Carabi: الكاريبي) waa gobol ka kooban bada Kaaribiyaanka, gasiiradaha ku wareegsan (oo qaarkood soo gaadhaan ilaa waqooyiga Badweynta Atlaantik), iyo xeebaha bilicsan ee ku caanka ah gobolkaasi. Gobolkani wuxuu dhacaa koonfurbari gacanka Mebsiko, koonfurta Maraykanka, bariga Bartamaha Ameerika iyo waqooyiga Koonfur Ameerika.
239,681 km2 (92,541 sq mi)
Dadka ku dhaqan
151.5/sq km (392/ sq ml)
Dadka loogu yimid deegaanka
Asalkooda Afrikaan, Asalkooda Cadaan, Asal Hindi, Asal Shiine, Arawak (Kalinago, Taíno)
Kaaribiyaan, Cali beestayn, Hindida Cas
Isbaanish, Ingiriis, Faransiis, Dhatj, Kareole, Ingiriis Kareole, Hindi Kaaribiyaan, Luuqado kale
13 maamulo boqortooyo
17 maamulo dowlado
Caasimadaha ugu Waaweyn
Liiska Caasimadaha ugu waaweyn Kaaribiyaanka
Internet Kuwa ugu sareeya
Liiska kuwa ugu sareeya internetka
UTC-5 iyo UTC-4
maabka gasiiradaha Kaaribiyaanka.
Dhinaca kale, deegaanada Kaaribiyaanku waxay ka kooban yihiin in ka badan 700 gasiiradood, kuwaas oo qaarkood aad u waaweyn yihiin ayagoo ah hal wadan halka kuwo kale yaryar yihiin. Marka la tixraacayo siyaasada juquraafiga caalamka ayaa gasiiradaha Kaariibiyaanka lagu tiriyaa gobol ka mid ah Waqooyiga Ameerika; waxaana loo nidaamiyaa boqortooyooyin yaryar, deegaano ku tiirsan dowlado ka fog iyo maamulo hoose.
xeebaha bilicda san ee Kaaribiyaanku ku caan baxay.
Bilicda gasiiradaha, cimilada diiran sanadkoo dhan, biyaha xeebaha oo aad u qurux badan darteed ayaa gobolka Kaaribiyaanku aad ugu caan baxay dalxiiska iyo booqashada tamashlaha ah.
Gasiiradaha ku yaala deegaanka Kaaribiyaanka
Xadka badaha wadanada gasiiradaha Kaaribiyaanka
Anguilla (Deegaan hoostaga Boqortooyada Ingiriiska)
Antigua iyo Barbuda (Boqortooyo Jamhuuri)
Aruba (Boqortooyada Nederlaan)
Barbados (Boqortooyo Jamhuuri)
Bonaire (Boqortooyo Nederlaan)
Gasiirada British Virgin (Deegaan hoostaga Boqortooyada Ingiriiska)
Gasiiradaha Kayman (Deegaan hoostaga Boqortooyada Ingiriiska)
Kurakaawo (Deegaan hoostaga Boqortooyada Ingiriiska)
Grenada (Boqortooyo Jamhuuri)
Guadeloupe (Deegaan hoostaga Boqortooyada Ingiriiska) oo hoostagaan
Jamayka (Boqortooyo Jamhuuri)
Martinique (Deegaan hoostaga Boqortooyada Ingiriiska)
Montserrat (Deegaan hoostaga Boqortooyada Ingiriiska)
Dekada Riika (Boorta Riika) (Barwaaqo sooranka Maraykanka)
Saba (Boqortooyada Nederlaan)
Saint Barthélemy (Boqortooyada Nederlaan)
Saint Kitts iyo Nevis (Boqortooyo Jamhuuri)
Saint Lucia (Boqortooyo Jamhuuri)
20px Midowga Saint Martin (Deegaan hoostaga Boqortooyada Ingiriiska)
Saint Vincent iyo Grenadines (Boqortooyo Jamhuuri)
Sint Eustatius (Boqortooyada Nederlaan)
Sint Maarten (Boqortooyada Nederlaan)
Trinidad iyo Tobago (Jamhuriyadda)
Gasiiradaha Maraykanka (Deegaano hoostaga Maraykanka)
Dhirta Iyo XayawaankaEdit
dhirta waaweyn ee ka baxda keymaha Dominika.
Rah nooc sunta badan leh
ubaxa geedka Caesalpinia.
Geedaha u gaarka ah deegaanka.
Aargoosato nooca laga helo xeebaha Kaariibiyaanka.
Midhaha geedka malashas.
Kaluun nooc aad u yar oo khaas ku ah deegaankasi
Qaar ka mid ah nolosha Kaaribiyaanka
Nooc ka mid ah Xasharaadka Kaariibiyaanka
Mulac nooca cowlan ah
↑ McWhorter, John H. Oxford University Press US. p. 379. ISBN 0-19-516670-1 http://books.google.com/books?id=zdxJJVY54nYC&pg=PT387. Maqan ama ebar |title= (caawin)
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Kaaribiyaan&oldid=175359"
Last edited on 1 Luuliyo 2018, at 06:06
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 1 Luuliyo 2018, marka ee eheed 06:06.